Imveliso yeTshayina yoTywala iFleol yoFuno kunye nabavelisi | Huasheng
Icacisiwe Uboya bokuCofa
Chwetheza T112 112 122 132
Ubunzima (g / cm3) 0.10-0.50 0.10-0.43 0.30-0.42 0.25-0.35
Ubunzima (mm) 0.5-70 2-40 2-40 2-50
Ibakala loboya UOrino Merino Wool Uboya baseTshayina
Umbala Umbala oMhlophe / o-grey / omnyama okanye umbala wepantone
Isiqinisekiso I-ISO9001 kunye ne-SGS kunye ne-ROHS kunye ne-CE, njl
1.Qiniseka. Ibarbs zefayibha zidityaniswe kunye ngokuqinileyo kwaye aziyi kutyhilwa.
2.Ukuxhathisa kwe-Abrasion. Uboya obucinezelelweyo buziva bunesakhiwo esomeleleyo esichasene ne-abrasion.
3.Umkhenkce kakhulu. Uboya obucinezelelweyo baziva bunokufakelwa kwamanzi okungafaniyo.
4.Ubuyiselo lomlilo. Uboya buziva bunendalo ukubuyela komlilo, okuvumela ukuba ubomi benkonzo ende kwaye bungasetyenziswa kwiindawo ezinokutsha.
5.Yendalo kunye ne-hypo-allergenic. Zonke izinto ezenziwe ngoboya ezivakala ziyindalo kwaye ngaphandle kwayo nayiphi na imichiza okanye enye into eyonakalisayo kuyo.
6.Ingxolo ephantsi. Ucinezelo loboya obuziva lusetyenziswa kwifenitshala lunokunciphisa ingxolo kwaye lukhusele umgangatho.
7.Ngokwezifiso. Ubungqingqwa, imibala kunye nobungakanani boboya obuxinzelelweyo buziva bunokwenziwa ngokweemfuno zabathengi.
I-1) Amanzi amdaka, atywinwa amatywina, iirhasi, imingxunya, iminyango yokungena emnyango, iitshaneli zeewindows, iipads zokunciphisa isidlali eshukumayo, iibhloko zokuthambisa zokuthambisa, amavili kunye neepads, iigrommets.
2) Tsala iipads zentsimbi yokucoca, kunye neebhloko zokuthambisa ezithandekayo, amavili kunye neepads, isandi sokubulala i-chassis, i-spacers, isikrini sokushicilela iitheyibhile zokucoca iifilitha, izihluzo, izinto zokuthambisa, ibhola kunye nokuqengqeleka okuthwala i-washer yogcino lweoyile kunye neasher encinci engabandakanyi ii-washers, ii-liners , iintambo / ukuhambisa amanzi.
3) Izixhobo zothuli, iiwelders, iiplagi zokucoca, i-washer yokugcina igrisi, ukunyibilika kokuncitshiswa kwendlu, iiarhasi ezinganyanzelekanga, ii-dampers, ii-oyile zokuthambisa, iigrisi zokugcina, i-inki iipads, iifayile zephuli yesiraphu, iipads zeplanethi yamathambo, kunye nezinye izinto ezifunekayo xa kufuneka.
Edlulileyo: Iibhola ezomileyo zoboya
Okulandelayo: Ifayibha yePolyester